Teeknoolojii: Baasii interneetii mobaayila keessan hir'isuuf kan gochuu qabdan - BBC News Afaan Oromoo
Teeknoolojii: Baasii interneetii mobaayila keessan hir'isuuf kan gochuu qabdan
Itiyoo-telekom maamiltoota miliyoona 66 ta'an akka qabu dubbatama. Maamiltoota kana keessaa ammoo miliyoona 17 kan ta'an mobaayila(simuu) isaaniitiin tajaajila interneetii argatu jedhama.
Itiyoo-telekoom warreen tajaajila interneetii gatii gadi aanaatiin dhiyeessan keessaa tokko akka ta'e namoonni baayyeen irratti walii ni galu.
Tarii isin, "Interneetiin amma kana ani bitadhe yoomittuu dhume?" Kaardii kanan bitadhe ar'a mitii, eessa dhaqe?" jettanii ofii keessan gaafachuun keessan hin hafu.
Bilbiloota keessan Androoyidiifi IOS ta'anirratti sirreeffamoota tokko tokko isin taasiftanii baasii keessan hir'ifachuu dandeessan isinitti himna.
Galmee bilbila harkaa tibbanaa dudduuba maaltu jira?
Android fi IOS maalidha?
Andirooyidiin Googiliin kan hojjetame ta'ee appilikeeshinii mobaayiloonni gosa gara garaa itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf, Saamsang, Huwaawwee, LG fi techno kanneen jedhamaniifi kan biroon hedduun appilikeeshinii Andirooyid jedhamu ni fayyadamu.
IOS Apple'n kan hojjetame ta'ee appilikeeshinii bilbiloonni akka iphone, ipad fi tachii itti fayyadamanidha.
Warreen akka 'facebook' fi 'WhatsApp' kanneen fakkaatan guyyaa guyyaan itti gargaaramnu appilikeeshiinii isaanii irratti sirreeffama salphaa ta'e taasisuun attamiin akka baasii interneetii keenyaa hir'isuu dandeenyu isinitti himna.
Yeroo dhiyoo asitti 'facebook'n viidiyoofi suuraawwan sosocho'an akka ofumaan taphatan taasifameera. Viidiyoowwan kun akka ofiidhuma isaaniitiin hin taphanne taasisuudhaaf (Video Autoplay off) gochuudhaaf:
Bilbila Andirooyidiirratti kana hordofaa፡ bakka Setting and Privac' seenaa> Data Saver kan jedhu banaa (On) godhaa.
Bilbila IOS (iphone) irratti ammoo kana hordofaa: Setting > Media and Contact > (Video and Photos) > (Auto-play) > keessa seenaatii On Wi-Fi connections only kan jedhu banaa (On) godhaa.
Dabalataanis bilbiloota Andirooyidii keessanirratti daataa xiqqaa kan fayyadamu Facebook Lite kan jedhamu appilikeeshinii Facebook'n Google play keessa seentanii buufachuun/gayyaafachuun fayyadamuu ni dandeessu.
Filannoon biraaa ammoo appilikeeshinii 'Facebook' jedhu fayyadamuurra 'Opera Mini' appilikeeshinii interneeta ittiin sorooban(Internet Browser Apps) fayyadamuun baasii daataa hir'isuun ni danda'ama.
Kan hubachuu qabdan, 'Facebook' 'Facebook Lite' tiin ykn appilikeeshinii isaatiin yeroo fayyadamtan hawwatuumaafi filannoon jiru garuu hir'achuu ni danda'a.
"Robollamadas" maal? akkamiin irraa of eegdu?
Garee WhatsApp meeqa keessa jirtu? Suuraawwaniifi viidiyoowwan kuusaa suuraa (Photo Gallery) keessa jiran heduudha jechuun daataa mobaayilaa hedduu fayyadamaa jirtu jechuudha.
Daataa WhatsApp fayyadamu hir'isuuf kana hordofaa.
Dura Setting banaa > Data and Storage Usage > kan jedhu keessa seenaa. Isaan booda appilikeeshinii Select Media Auto Download Options kan jedhu filachuudha > yeroo daataa mobaayilaa fayyadamtan (When Using Mobile Data) kan jedhu banuun No Media isa jedhutti jijjiiraa.
Caalaatti baasii daataa WhatsApp'n fayyadamu hir'isuudhaaf Call Setting isa jedha gara jalaatiin Low Data Usage filachuun ni danda'ama.
YouTube fayyadamuun viidiyoo daawwachuun daataa hedduu fixa. Mobayilaan viidiyoo daawwachuu yoo barbaaddan, setting kan jedhu banuudhaan 240p ykn 144p isa jedhurra godhachuudhaan qulqullina gadi aanaa ta'een ilaaluudhaan %60 baasii dabaluu danda'u kan kan HD (720p) irraa hir'isuun ni danda'ama.
Filannoo biraatiin eyyama abbummaa yoo qabaattan viidiyoo jaallattan YouTube irraa bakka tajaajilli wi-fi'n jiru deemtanii buufachuun/gayyaafachuun guyyoota 30'f baasii tokko malee irra deddeebitanii daawwachuu ni dandeesu.
Appilikeeeshinii haaromsuu (Updating Apps)
Appilikeeshinoonni jiran yeroo baayyee dhaabbileen omishanii dhiyeessaniin fofoyyaa'uun ni dhiyaatu.
Appilikeeshinoota haaraa foyyaa'anii dhiyaatan kana fayyadamuun baasii interneetii guddaaf nama saaxila. Kana waan ta'eef, bakka tajaajilli Wi-fi jiru qofa deemuun haaromsachuutu wayyaa.
Appilikeeshinii haaromsachuuf Wi-fi qofa fayyadamuuf waan itti aanan kana hordofaa.
Bilbilawwan Andirooyidii irratti፡ Google Play Store banuun> Setting > seenaatii Auto-update apps > Auto-update apps over Wi-Fi only kan jedhau banaa On godhaa.
Bilbiloota ios irratti: Setting > iTunes & App Stores > keessaa Use Mobile Data banuun Off isa jedhurra godhaa.
Waliigalatti daataa bilbilli keenya fayyadamu xiqqeessuu
Bilbilli keessan appilikeeshinii Andirooyidii kan fayyadamu yoo ta'e bilbila keessanirratti sirreefamoota itti aanan kana taasisuun fayyadama interneetii daangessuu ni dandeessu.
Setting > Network & Internet > keessa seenuun Data Usage > Data Saver kan jedhu banaa On kan jedhurra godhaa.
Telepoorteeshin: Yaada asoosamaa kalaqa dhugaatti geeddarame
Paartileen siyaasaa Oromoo alaa galan maalitti jiru?
Afrikaan Kibbaa Zuumaa malaammaltummaan qorachuufi
Yaadannoowwan Kofii Anaan
'Mootummaan sarbama naannoo Somaalee gadi fageenyaan qorachuu qaba'
Taphattoota ciccimoo 11 torbee kanaa
Hindiitti gareen balaa lolaa namoota 22,000 baraaran